Biography uye mabasa aHoracio Quiroga, tenzi wenyaya. | Zvazvino Zvinyorwa
John Ortiz | | Biography, Nhoroondo yezvinyorwa, Nhetembo, Nyaya, Zvinotyisa
Munyori Horacio Quiroga.
Horacio Silvestre Quiroga Forteza (1878-1937) aive mutauri wenyaya uyo muhupenyu hwake hwese aikwezva kunyora nezve zvakasikwa uye rudo. Zvisinei, idzi nyaya dzakaratidza hupenyu huzere nenjodzi; akarasikirwa nevazhinji vepedyo uye nyaya dzake dzerudo dzaive dzisina magumo anofadza.
Akazendamira kune mamwe avant-garde ekunyora mafambiro, mazuva ano, uye zvakasikwa, uye aigara achiisa zvisikwa semuvengi wevanhu. Aionekwa semumwe wevanonyanya kutaura nyaya muLatin America, kwete munguva yake chete, asi yenguva dzose.
1.1 Hupenyu hwepakutanga uye mhuri
1.3 Mavambo ekutanga
1.4 Horacio uye wake murky rudo
Hupenyu hwepakutanga uye mhuri
Horacio akaberekerwa muUruguay musi waDecember 31, 1878Akagara chikamu chikuru chehupenyu hwake muArgentina. Amai vake vaive Pastora Forteza nababa vake Facundo Quiroga, akafa mushure mekuita tsaona nepfuti paakadzoka kubva kunovhima. Horacio, panguva iyoyo, aive nemwedzi miviri yekuberekwa.
Amai vake vakaroora Mario Barcos, murume akakunda rudo rweQuiroga. Muna 1896 baba vokurera vemurume uyu vakaita sitiroko yakamusiya asisina remuromo uye kuoma mitezo.
Muguta guru renyika yekwake, akapedza chikoro chesekondari.a, panguva yehudiki hwake munyori akaratidza kufarira kwake hupenyu munyika, kutora mifananidzo, uye zvinyorwa. Aive mucherechedzi wechidiki, mune mamwe mashopu ePolytechnic Institute uye paUniversity yeUruguay akadzidza mabasa akasiyana siyana pasina chinangwa chekukodzera.
Munguva yemazuva ake ekuyunivhesiti akapedza nguva ari mumusangano, ipapo murume wechidiki akamufarira mufilosofi, futi akashanda mumapepanhau Magazini yacho y Kuchinja. Ichi chiitiko chakamubatsira kupora maitiro ake uye kuwana kuzivikanwa. Kusvikira 1897 akanyora makumi maviri nembiri nhetembo, idzo dzakachengetedzwa nanhasi.
Consistorio del Gay Saber raive boka remabhuku raakavamba pakutanga kwebasa rake muna 1900, ndipo paive ipapo paakambozama semuridzi wenyaya. Muna 1901 akaburitsa bhuku rake rekutangaNekudaro, mugore iro vakoma vake vaviri neshamwari yake Federico vakafa, vaakauraya netsaona paakapfurwa nepfuti.
Kurwadziwa kwenjodzi idzi, kunyanya kweshamwari yake, kwakamanikidza munyori kugara muArgentina, kwaakaenda kusango remamishinari uye akakwanisa kusvika pakukura sehunyanzvi uye munyori. Akarairwa semudzidzisi uye akawana basa rekudzidzisa kuNational College yeBuenos Aires.
Horacio uye wake murky rudo
Horacio akadzidzisa Spanish, uye muna 1908 akadanana naAna María CiresB, akamanikidzwa kukumbira vabereki vake kuti vabvumire kuti varoore. Pakupedzisira vakabvuma, vaviri vacho vakaenda kunogara musango uye vakaita vana 2; asi Ana haana kufara kugara imomo, uye akafunga kuzviuraya muna 1915.
Munyori akafunga kudzokera kuBuenos Aires nevana vake; akashanda semunyori kuUruguayan Consulate General. Panguva iyoyo, akafuridzirwa nerwendo runokosha kuenda musango, Quiroga yakaburitsa mabasa akakosha, anosanganisira: Ngano Dzesango, rakabudiswa muna 1918.
Mumakore gumi apfuura ehupenyu hwake, Horacio akaroora María Elena BravoIvo vaive nemwanasikana uye vakagara musango reMisiones. Havamutenderi kuti achinjise chinzvimbo chake muKomisheni nekuda kwekuchinja kwehurumende, mukadzi wake wechipiri akaneta nehupenyu hwesango ndokudzokera kuBuenos Aires, izvi zvakaodza moyo munyori.
Kuparadzana kwavo hakuna kutadzisa Maria nemwanasikana wake kuti vamuperekedze paakarwara. Quiroga akadzokera kuBuenos Aires kunorapwa, akatambura nekenza yeprostate. Musi waFebruary 19, 1937, munyori akasarudza kupedza hupenyu hwake nekuda kwekudhakwa kwecyanhydric, izvi mushure mekugara wakakomberedzwa nenjodzi.
Mifananidzo yakasiana yaHoracio Quiroga.
Mabhuku enhau anoratidza chinyoreso chaQuiroga, ivo vakave echinyakare ezvinyorwa; akaratidzira chokwadi chake kuburikidza nekunyora asina kushandura nyaya dzake kuita nhoroondo yehupenyu hwake. Mamwe emabasa akakosha e "mukuru tenzi weLatin American tale" aive nemusoro unoti:
- Coral matombo (1901).
- Nyaya yerudo rune mutsindo (1908).
- Ngano dzerudo, kupenga uye kufa (1917).
- Ngano kubva musango (1918).
- Anaconda nedzimwe nyaya (1921).
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Biography » Biography uye mabasa aHoracio Quiroga
Biography uye mabasa aMario Vargas Llosa